Ajụjụ - gomymobi.com
Anyị na-anwa inyere gị aka n'ịghọta ihe ngwọta anyị ngwa ngwa
Ọ bụ ezie na anyị kwenyere na ị kwesịrị ịnwale ezigbo nnwale iji ezigbo ihe ngwọta kachasị mma, mana oge ụfọdụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịghọta ihe ọ bụla, biko chọpụta site na ajụjụ anyị na-ajụkarị n'okpuru; ma cheta na anyị nọ ebe a iji nyere gị aka.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị?
Ajuju gi juru ebe a
Onye Nrụpụta Ihe
Onye Okike Storelọ
Enwere m ike ịnweta bandwidth na-akparaghị ókè maka weebụsaịtị m?
N'ezie! Anyị na-ekwe nkwa na okwu a.
Enwere m ike iji SSL na ngalaba omenala?
Mba! Ugbu a anyị anaghị akwado SSL mana anyị ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Ee! Naanị zụrụ SSL asambodo nke gị wee jiri maka ngalaba ahaziri iche.
Enwere m ike ịnweta ibe weebụ na-akparaghị ókè maka weebụsaịtị?
Ee! Ezubere ikpo okwu anyị iji nye gị ohere ịmepụta ibe weebụ na-akparaghị ókè, naanị mepụta dịka ịchọrọ.
Enwere m ike ịgbakwunye ihe ọhụụ na ibe weebụ?
Ndo ma Mba! Ebumnuche anyị na-enyere ndị mmadụ aka ịmepụta weebụsaịtị azụmahịa ngwa ngwa site na mkpokọta mkpokọta ọkacha mmasị kachasị amasị, naanị ha kwesịrị ịhọrọ otu isiokwu wee malite iwu ụlọ ọrụ okike; ọ gaghị adị ha mkpa iche echiche banyere otu esi ahazi ihe ndị ahụ iji mee ka peeji ndị mara mma, ọ bụ ọgba aghara ma ọ bụrụ na ha enweghị oge buru ibu.
Ee! Ugbu a ị nwere ike ịmepụta mkpokọta site na ncha site na ike anyị Element Builder.
Enwere m ike ibudata weebụsaịtị mepụtara nke ọma?
Ee! N’akụkụ na-ekwusara websaịtị ndị mepụtara ka ha nwee ngalaba / sub-ngalaba, ma ọ bụ na-ebugote site na FTP, anyị na-akwado gị n’ịbudata ebe nrụọrụ weebụ mepụtara n’ụzọ zuru ezu.
Enwere m ike ịnweta isiokwu pụrụ iche maka weebụsaịtị m?
Nzuzo, onye nyocha anyị bụ ee! Ga-ebugo isiokwu gị pụrụ iche, wee debe ya dị ka nkeonwe iji maka weebụsaịtị gị naanị.
Gbanwee aha peeji nke saịtị
Saịtị Page Mbụ nwere ike gbanwee site na menu Ntọala peeji nke saịtị ọ bụla na Ọnọdụ Editing.
Kedu otu esi tụọ ngalaba aha m na saịtị?
I nwere ike na-ezo omenala ngalaba na-edezi na ọnọdụ, mgbe banyere gị omenala na ngalaba, ị ga-aga na ngalaba na-edeba aha mgbe ahụ ike a CNAME ndekọ & arụtụ aka na anyị na ngalaba www.gomymobi.com
Enwere ike ịgbakwunye blog na ụlọ ahịa na weebụsaịtị?
Mba, azịza a agaghị emepe n’ọdịnihu dị nso. Biko jiri usoro ịde blọgụ dị ka Medium wee tinye njikọ blọgụ na weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ahịa gị.
Enweghị ngalaba, enwere m ike ịnweta weebụsaịtị azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa?
Ee! Ọ dị mfe, naanị ị ga-eji obere ngalaba anyị maka weebụsaịtị na ụlọ ahịa gị. Ozugbo inweela ngalaba ahaziri iche, ma kenye ha weebụsaịtị na ụlọ ahịa gị, mgbe ahụ ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị mbibi ma ọ bụ ọnwụ.
Enwere m ike ịnweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'efu ruo mgbe ebighị ebi?
N'ezie! Anyị na-enye gị ngwaọrụ na ihe ngwọta iji ree ngwaahịa gị okike na ụwa maka n'efu na ndụ. Mana n'ihi ịmachi ihe onwunwe, ị nwere ike ịnwe ngwaahịa 10 nwere akaụntụ n'efu.
Enwere m ike ire ihe na weebụsaịtị m?
Ee! Mgbe imepụta weebụsaịtị, naanị ị ga-emepe ụlọ ahịa maka ya wee malite ire ihe ọ bụla ị nwere.
Ngwaahịa anaghị egosipụta ka ịtụ ụdị?
Ga-abanye usoro ntinye nke ngwaahịa na Ntọala Ngwaahịa.
Kedu ka m ga-esi jikọta ngalaba m ụlọ ahịa ahụ ozugbo?
Plọ ahịa na-arụ ọrụ dị ka folda nchekwa nke ngalaba, yabụ na ọ gaghị ekwe omume itinye ngalaba na ụlọ ahịa ozugbo.
Kedụ ka m ga-esi gbanwe ọnụọgụ nke ihe ndị dị na peeji ndenye ọpụpụ?
Nwere ike ịgbanwe ọnụọgụ na ibe ụgbọ, peeji ndenye ọpụpụ bụ ebe itinye iwu naanị.
Kedụ ka m ga - esi gbaso iwu m nyere?
Mgbe etinyechara iwu ahụ nke ọma, a ga-ebutegharị gị na peeji nke iwu ịkwụ ụgwọ & soro usoro emepụtara n'oge na-adịbeghị anya, ị na-ahụ njikọ a na email ezigara na ndị na - etinye email gị.
Etu esi agbanwe / dezie njikọ vidiyo na gburugburu saịtị?
Maka ihe pụrụ iche na - enweghị ike igbanwe site na ndị ndezi ma ọ bụ koodu isi, ị ga - emerịrị oghere na isiokwu-setings.php nke isiokwu saịtị wee jiri PHP hazie ụkpụrụ gbanwere
Ọ mata na m kwesịrị iji kwalite atụmatụ m?
Ndo maka nke a, mana ụfọdụ atụmatụ na ihe ngwọta bụ maka ndị otu akwụrụ ụgwọ, biko kwalite atụmatụ gị iji ngwaọrụ ndị a. Atụmatụ anyị dị oke ọnụ ala, kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-eji akaụntụ ngosi, mgbe ahụ ọtụtụ njirimara dị mkpa nwere nkwarụ, biko gbalịa iji ezigbo akaụntụ, ọ bụ n'efu ka ịdebanye aha.
Ozi a ga-egosi na akaụntụ gị agwụla, biko megharịa ka ị na-eji.
Ozi a na-egosi ịdọ aka na ntị na ị nweghị ike wedata akaụntụ gị iji belata atụmatụ, n'ihi na ikpo okwu enweghị ike ikpebi ihe saịtị / ụlọ ahịa ga-ehichapụ. Yabụ ị nwere ike ịmegharị atụmatụ gị ugbu a ma ọ bụ kwalite na atụmatụ dị elu.
Enwere m ike ịmepụta atụmatụ dị iche iche maka saịtị na ụlọ ahịa?
Ndo maka nke a, mana enweghị atụmatụ dị iche maka saịtị ma ọ bụ ụlọ ahịa, naanị atụmatụ na mkpokọta saịtị & ụlọ ahịa akwadoro, ị nwere ike ị gbanye ma ọ bụ gbanyụọ maka ngwọta ụlọ ahịa ma setịpụ mmachi maka saịtị na ụlọ ahịa.